Fa maninona no Apple Pencil no tsara kokoa noho ny stylus iPad hafa? | Vaovao IPhone
Tsy vitsy ny mpampiasa gaga amin'ny Apple Pencil, indrindra ireo efa zatra mampiasa an'io karazana fitaovana io alohan'ny hahatongavan'ny pensilihazo Cupertino. Ny ekipan'i 9to5Mac dia nanapa-kevitra ny hanao fitsidihana kely ny pensilihazo lafo vidy ho an'ny iPad Pro, izay mazava ho azy ny Apple Pencil, ahoana no hahakely azy io. Tena vokany ratsy ny vokany. Ny Apple Pencil dia azo antoka fa lafo roa ka hatramin'ny enina heny noho ny safidy hafa. Tena namboarin'ny sy ho an'ny iPad Pro, izany no mahatonga ny sarotra ho an'ny iray hafa hahatratra ny haavon'ny haavo sy ny tena fitondran-tena.
Raha vantany vao ampiasainao ny Apple Pencil (araka ny 9to5Mac ary haino aman-jery manokana hafa) tsapanao fa tena nilaina izany fiandrasana izany. Na izany aza, raha vao jerena ny pensilihazo dia mety ho toa tsy dia mahazatra loatra, ankoatr'izay, Vita amin'ny plastika izy io, fitaovana tsy fahita firy amin'ny vokatra Apple tato ho ato. Na izany aza, ny teknolojia mamantatra ny felatanana hisorohana ny lesoka marina dia fandrosoana tsy manam-paharoa izay mahatonga ny pen ho fitaovana tsy mbola fahita teo amin'ny takelaka.
Ny fisamborana ny Apple Pencil miaraka amin'ny iPad Pro dia tsy mitovy amin'ny natolotry ny sisa amin'ny pensilihazo fifaninanana amin'ny fampiharana ny Notes ohatra, mampiseho tsipika azo tanterahina kokoa, izay mamaly ny tsindry hafa amin'ny fampiharana ny layout. ary mamela ny tenantsika haneho ny hevitsika toy ny hoe taratasy. Manana ny vidiny ireo namana ireo, indrindra ny 99 dolara. Na dia toa lafo loatra aza ny vidin'ny Apple Pencil, amiko ary na amin'ireo mpanjifany aza dia tsy maintsy lazaina fa Apple dia efa nahalala ny fomba hanaovana azy, ary manao azy tsara tokoa. Inona no tsy midika fa ny Apple Pencil sy ny iPad Pro dia hitohy ho vokatra be dia be ary mazava ho lafo.
Ao amin'ny sary lohateny lohateny, nataon'ny mpanoratra iray an'ny 9to5Mac azontsika atao ny mankasitraka ny fomba ny Apple Pencil dia tsy isalasalana fa ny zava-misy indrindra amin'ny fitaovana rehetra raha oharina, ny Jot Pro sy Jot Dash an'i Adonit, ary koa ny an'ny Karakara sy ny rantsantanana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Fa maninona no Apple Pencil no tsara kokoa noho ny stylus iPad hafa?
Italiana dia mandoa an'i Apple noho ny antoka tsy dia mazava momba ny Apple Care